အခက်အခဲ၏ဒီဂရီ: လွယ်ကူသော , အလယ်အလတ် မာ , အရမ်းခက်တယ်
ဒေတာစုဆောင်း ( )
ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး ( )
[ ] သစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်စမ်းသပ်မှုဆန့်ကျင်ငြင်းခုံ၌, Kleinsman and Buckley (2015) wrote:
အမှန်အတိုင်းလက်ခံအတွက်ရလဒ်တွေအသုံးဝင်သောဖြစ်စစ်ကြောစီရင်ကြသည် "ထိုသို့ Facebook ကစမ်းသပ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်များကိုအနိမ့်နှင့်ပင်လျှင်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်မှန်သည်ကိုပင်လျှင်, ထောကျခံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်ဒီနေရာမှာလောင်းကြေးမှာအရေးပါတဲ့နိယာမလည်းရှိ၏။ ခိုးယူပမာဏပါဝင်ပတ်သက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနေပါစေခိုးယူဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဗဟုသုတနှင့်သဘောတူညီချက်မပါဘဲအပေါ်စမ်းသပ်ခံရဖို့မပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ထိုသုတေသနသမျှသဘောသဘာဝ၏။ "ထိုနည်းတူ
ဤအခနျး-လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် deontology-သည်အများဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဆက်စပ်ဤဆင်ခြေ? တှငျဆှေးနှေးနှစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်၏ဘယ်
အခုဆိုရင်သင်ဤအနေအထားကိုဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သင်ဘယ်လို The New York Times သတင်းစာများအတွက်သတင်းထောက်ဖို့ကိစ္စငြင်းခုန်မလဲ
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) သုတေသီများဖျက်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းမှာ tweet ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဖြစ်စေ၏မေးခွန်းကိုစဉ်းစား။ နောက်ခံအကြောင်းသင်ယူရန်သူတို့ရဲ့စက္ကူကိုဖတ်ပါ။
deontological ရှုထောင့်ကနေဒီဆုံးဖြတ်ချက် Analyze ။
တစ်ဦး consequentialist ရှုထောင့်ကနေအတိအကျတူညီဆုံးဖြတ်ချက် Analyze ။
ဘယ်ငျသညျဤအမှု၌ သာ. ယုံကွညျရှာရမလဲ?
[ ] တစ်ဦးလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များကျင့်ဝတ်အပေါ်ဆောင်းပါး, ခုနှစျတှငျ Humphreys (2015) , အားလုံးထိခိုက်ပါတီများ၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲပြုသောအမှုနှင့်အခြို့နှငျ့အခွားသူမြားကိုကူညီထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေး၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်အောက်ပါဖြစ်နိုင်ချေစမ်းသပ်မှုအဆိုပြုထား။
"သုတေသနကဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှကလေးငယ်အတွက်လမ်းမီးရောင်အားမရအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုကိုလျော့ချလိမ့်မည်ရှိမရှိတွက်ချင်ကြောင်းရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းများမှအစုတခုကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသည်ဆိုရမည်။ ဤသုတေသနပြုခုနှစ်တွင်ဘာသာရပ်များမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများမှာ: အရာဇဝတ်ကောင်၏သဘောတူချက်ရှာဖွေလျက်ဖွယ်ရှိသုတေသနအလျှော့ပေးလိုက်လျောမယ်လို့နှင့်ဖွယ်ရှိ (ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား၏ချိုးဖောက်မှု) မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလာမည့်မဖြစ်လိုရှိ၏ ထိုရာဇဝတ်သားဖွယ်ရှိ (တရားမျှတမှုကိုချိုးဖောက်) အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲသုတေသန၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုခံရလိမ့်မည်, နှင့်သုတေသန၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားကွဲလွဲစရာဖြစ်လိမ့်မည် - ကထိရောက်သောလျှင်အထူးသဖြင့်အတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (စေတနာအကဲဖြတ်များအတွက်အခက်အခဲထုတ်လုပ်) ကတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ။ ။ ။ ဤနေရာတွင်အထူးကိစ္စများသို့သော်ရုံဘာသာရပ်များပတ်ပတ်လည်မဟုတ်။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာအားရာဇဝတ်ကောင်အရပျ၌မီးခွက်တို့ကိုချပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေဆန့်ကျင်လက်တုံ့ပြန်လျှင်, ထို Non-ဘာသာရပ်များမှရယူအန္တရာယ်များလည်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်ဤအအန္တရာယ်များကိုအလွန်သတိထားဖ​​ြစ်ပေမယ့်သူတို့မှားယှငျးစှာထုတ်ဝေဖို့အစိတ်အပိုင်းအတွက်လှုံ့ဆော်သူတို့ကိုယ်သူတို့နေသောချမ်းသာကြွယ်ဝတက္ကသိုလ်များမှသုတေသနပညာရှင်များကများ၏နာမကျန်းဖြစ်-တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမျှော်လင့်၌ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်နေသောကြောင့်သူတို့ကိုထမ်းဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။ "
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဖြစ်စမ်းသပ်မှုသင်တို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းကအီးမေးလ်ရေးထား? သငျသညျအဆိုပြုထားအဖြစ်သူတို့ကိုစမ်းသပ်မှုပြုပါကကူညီနိုင်မလား? အဘယျသို့အချက်များသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် impact နိုငျသလဲ
[ ] 1970 ပြည့်လွန်နှစ် 60 ယောက်ျားခုနှစ်တွင်အမေရိကန် (သုတေသီတက္ကသိုလ်အမည်ကိုပါဘူး) ၏အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်အစိတ်အပိုင်းအတွက်တက္ကသိုလ်မှာယောက်ျားရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရာအရပျကို ယူ. လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုပါဝင်ခဲ့ (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) ။ အဆိုပါသုတေသီများသည်လူသောသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသချိုးဖောက်မှုများ, တုံ့ပြန်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြ Sommer (1969) အဖြစ်သတ်မှတ် "ကျူးကျော်သူတွေကမလာစေခြင်းငှါအရာသို့လူတစ်ဦး၏ကိုယ်ခန္ဓာပတျဝနျးကငျြမမြင်ရတဲ့နယ်နိမိတ်နှင့်အတူဧရိယာ။ " နောက်ထပ်အထူးသခြင်း, သုတေသီများကိုဘယ်လိုတစ်ဦးကိုလေ့လာဖို့ရွေးချယ် လူသားရဲ့ဆီးသွားခြင်းအနီးအနားမှာတခြားသူတွေရဲ့အထံသဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးသက်သက်သာလေ့လာလေ့လာမှုပို့ချပြီးနောက်သုတေသီများလယ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလက်ဝဲ-အများဆုံးသုံးဆီးရေချိုးခန်းထဲမှာဆီး (သုတေသီဒီဖြစ်ပျက်အတိအကျဘယ်လိုရှင်းပြပါကြဘူး) ကိုသုံးခိုင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်တက်ရောက်လာသူများနှင့်မိမိကိုယ်ါအကွာအဝေး၏သုံးအဆင့်ဆင့်၏တဦးတည်းမှတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အချို့သောလူတို့သညျအဘို့အပွညျကိုအမှီလူတခြို့အတှကျပွညျကိုအမှီသူတို့ထံမှတစ်ဦးဆီးတယောက်အာကာသအသုံးပြုနှငျ့အခြို့တို့သညျကိုမပွညျကိုအမှီရေချိုးခန်းထဲဝင်ဘေးမှာသူတို့ကိုရန်ဆီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများပါဝင်သူရဲ့ဆီးကပ်လျက်အိမ်သာတင်းကုပ်အတွင်း၌သုတေသနလက်ထောက် stationing အားဖြင့်ဇွဲ-သူတို့ရဲ့ရလဒ် variable တွေကို-နှောင့်နှေးအချိန်နှင့်တိုင်းတာ။ ဤတွင်သုတေသီများတိုင်းတာခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖော်ပြခဲ့ပုံကိုဖွင့်:
"တစ်လေ့လာသူအဘာသာရပ်များ '' ဆီးဖို့ချက်ချင်းကပ်လျက်အိမ်သာတင်းကုပ်ထဲမှာတပ်စွဲခဲ့သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းကအာရုံ cues [ဆီးသွားခြင်း] ၏စတင်များနှင့်ချုပ်ရာအချက်ပြဖို့အသုံးပြုမရနိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ။ ။ ။ အဲဒီအစား, အမြင်အာရုံ cues အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာသူအိမ်သာတင်းကုပ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမုသာစကားကိုစာအုပ်တွေတစ် stack ထဲမှာ imbedded တစ် periscopic Prism ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြမ်းပြင်နှင့်အိမ်သာတင်းကုပ်၏နံရံအကြား 11 လက်မ (28 စင်တီမီတာ) အာကာသအသုံးပြုသူရဲ့အောက်ပိုင်းကိုယ်ထည်၏, ထို periscope တဆင့်တစ်ဦးအမြင်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဆီး၏ရေစီး၏ဖြစ်နိုင်သောတိုက်ရိုက်အမြင်အာရုံတွေ့နေရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါလေ့လာသူ, သို့သော်, တစ်ဦးဘာသာရပ်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အဆိုပါလေ့လာသူတစ်ဦးဘာသာရပ်ဆီးဖို့အရှိန်မြှင့်လာသောအခါဆီးသွားခြင်းကိုစတင်အခါ, တစ်ရပ်တန့်နှင့်ဆီးသွားခြင်းရပ်စဲခဲ့သည့်အခါအခြားရပ်တန့်နှစ်ခုရပ်တန့်နာရီစတင်ခဲ့တယ်။ "
အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးစတင်ခြင်း၏တိုးမြှင့်နှောင့်နှေးစေပါတယ်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်ဇွဲ (ပုံ 6.7) ယုတ်လျော့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မှရလဒ်များ: 6.7 ပုံ Middlemist, Knowles, and Matter (1976) ။ ရေချိုးခန်းသို့ဝင်တဲ့သူယောက်ျားသုံးခွအေနမြေား၏တစျခုမှတာဝန်ကျ: အနီးကပ်အကွာအဝေး (ကပွညျကိုအမှီအခကျြခငျြးကပ်လျက်ဆီးထဲတွင်နေရာခဲ့သည်), အလယ်အလတ်အကွာအဝေး (ကပွညျကိုအမှီတယောက်ဆီးကိုဖယ်ရှားထားခဲ့ပါတယ်), သို့မဟုတ်လုံးဝမပွညျကိုအမှီတစ်ဦးဆီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အိမ်သာတင်းကုပ်ထဲမှာတပ်စွဲလေ့လာသူဆီးသွားခြင်း၏နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဇွဲစောငျ့ရှောကျနှင့်အချိန်အားစိတ်ကြိုက်-built periscope အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုပတ်ပတ်လည်စံအမှားများကိုမရရှိနိုင်။
[ ] သြဂုတ်လ 2006 ခုနှစ်, အတစ်မူလတန်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနှင့် ပတ်သက်. 10 ရက်ခုနှစ်, မစ်ရှီဂန်တွင်နေထိုင်သော 20,000 လူတို့သည်မိမိတို့မဲပေးအပြုအမူနှင့်သူတို့၏အိမ်နီးချင်းများ (ပုံ 6.8) ၏မဲပေးအပြုအမူပြသတဲ့မေးလ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ (။ ထိုအခနျးတှငျဆှေးနှေးစဉျ, US မှာ, ပြည်နယ်အစိုးရများအသီးအသီးရွေးကောက်ပွဲတွင်ဆန္ဒမဲပေးရပြီးဤအချက်အလက်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်သူမှတ်တမ်းများစောင့်ရှောက်) ဤအထူးသဖြင့်ကုသမှုအစဉ်အဆက်တစ်ခုတည်းအပိုင်းအစမေးလ်သည်အမှတ်အထိမြင်ကြအကြီးဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်: ဒါကြောင့် 8.1 ရာခိုင်နှုန်းမှတ်ခြင်းအားဖြင့်မဲပေးသူနှုန်းကိုတိုးမြှင့် (Gerber, Green, and Larimer 2008) ။ ရှေ့နောက်စကား၌ဤထားရန်, တစ်အပိုင်းအစစာပေးပို့ပုံမှန်အားဖြင့်အကြောင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်း point ရဲ့တိုးထုတ်လုပ်ရန် (Gerber, Green, and Larimer 2008) ။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှု Hal Malchow အမည်ရှိသောနိုင်ငံရေးစစ်ဆင်ရေးစမ်းသပ်မှု (ယူဆရ Malchow ဤအချက်အလက်သည်ကိုယ်တော်တိုင်၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်နိုင်အောင်) ၏ရလဒ်ထုတ်ပြန်ဖို့ဖို့မ Donald အစိမ်းရောင် $ 100,000 ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်အောင်ကြီးမားခဲ့သည် (Issenberg 2012, p 304) ။ သို့သော်အလန် Gerber, Donald အစိမ်းရောင်နှင့်ခရစ္စတိုဖာ Larimer အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် 2008 ခုနှစ်အတွက်စက္ကူထုတ်ဝေကိုပြု၏။
သင်ဂရုတစိုက်ပုံ 6,8 အတွက် mailer စစ်ဆေးခြင်းအခါသင်သုတေသီ '' နာမည်တွေကပေါ်ပေါ်လာမသတိထားမိပေမည်။ အဲဒီအစားပြန်လိပ်စာလက်တွေ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စက္ကူမှအသိအမှတ်ပြုခုနှစ်တွင်စာရေးသူကိုရှင်းပြ: "အထူးကျေးဇူးတင်စကားဒီဇိုင်းဒီမှာလေ့လာမေးလ်အစီအစဉ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသူအလက်တွေ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ၏မာကု Grebner, သွားပါ။ "
ပုံ 6,8: ကနေအိမ်ရှင် mailer Gerber, Green, and Larimer (2008) ။ ဒီ mailer, 8.1 ရာခိုင်နှုန်းမှတ်အားဖြင့်အစဉ်အဆက် single-အပိုင်းအစ mailer များအတွက်လေ့လာခဲ့အကြီးဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမဲပေးသူနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
[ ] ဤသူ 20000 mailers စေလွှတ်ခဲ့သည်တခါယခင်မေးခွန်း, (ပုံ 6.8) အပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းအဖြစ် 60,000 အခြားအလားအလာနည်းပါးထိခိုက်မခံတဲ့ mailers, သင်တန်းသားများအနေဖြင့်တန်ပြန်ရှိ၏။ တကယ်တော့ Issenberg (2012) (p 198) Grebner [လက်တွေ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး] လူသူ့ရုံးခန်းဖွကွေားစက်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်ဒါကြောင့်အလျင်အမြန်, ဖုန်းဖြင့်တိုင်ကြားဖို့ဒုက္ခကိုယူသစ်ကိုခေါ်ဆိုကြောင်းမည်မျှတွက်ချက်ပေးနိုင်ဘယ်တော့မှခဲ့ "ကြောင်းသတင်းပေးပို့ သတင်းစကားတစ်ခုချန်ထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ "တကယ်တော့ Grebner သူတို့ကုသမှုတက်ခဲ့သည်ဆို၏ခဲ့လျှင်တန်ပြန်ပင်ပိုကြီးပြီနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ "ကျနော်တို့ငါးရာတထောင်ဒေါ်လာသုံးစွဲခြင်းနှင့်သင်နှင့်ငါသည် Salman Rushdie နှင့်အတူအသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့တပြင်လုံးကိုပြည်နယ်ဖုံးလွှမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အလန်။ " သူကအလန် Gerber, သုတေသီတဦးမှပြောပါတယ် (Issenberg 2012, p 200)
[ ] အလေ့အကျင့်၌, အများဆုံးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံသုတေသီများသင်တန်းသားများကို (ဥပမာ, ဒီအခနျးတှငျအသုံးယောက်အမှုလေ့လာမှုများ) မှစစ်မှန်တဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်မှာလေ့လာမှုများအကြောင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံလည်းဟုတ်မှန်သောအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်သောလေ့လာမှုများအဘို့ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သငျသညျသင်တန်းသားများမှစစ်မှန်တဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်မယ်လို့တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာမှု Design, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲသိက္ခာမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သော။ (အရိပ်အမြွက်: သင်ရုန်းကန်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုဖတျရှုကြိုးစားနိုင်ပါ Emanuel, Wendler, and Grady (2000) ။ )
[ ] သုတေသီများကမကြာခဏအသီးအသီးအခြားဖို့နဲ့အထွေထွေပြည်သူ့သူတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖော်ပြရန်ရုန်းကန်။ ဒါကြောင့်, ထိုမြည်းစမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိဆက်ဆံရေးနှင့်အချိန် re-ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, ယာသုန် Kauffman, သုတေသနအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စီမံချက်၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်အများပြည်သူမှတ်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Read Zimmer (2010) , ပြီးတော့ဒီအခန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့သောအခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကို အသုံးပြု. Kauffman ရဲ့မှတ်ချက်များကိုပြန်ရေး။
[ ] Banksy ယူနိုက်တက်နိုင်ငံတော်၌အကျော်ကြားဆုံးခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီး, သူနိုင်ငံရေးအရ-oriented လမ်းရေးခွ (ပုံ 6.9) အတွက်သိသည်။ သူ့ရဲ့တိကျတဲ့အထောက်အထားကို, သို့သော်, နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူချင်တယ်ဆိုရင်သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအများပြည်သူလုပ်နိုင်အောင် Banksy ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ 2008 ခုနှစ်တွင် The Daily Mail က, တစ်ဦးကသတင်းစာ, Banksy ရဲ့အမည်ရင်းဖော်ထုတ်ရန်ဟုဆိုကာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအခါ 2016 အတွက်, Michelle Hauge, မာကု Stevenson, ဃကင်မ် Rossmo နှင့်စတီဗင်စီသည် Le Comber (2016) ပထဝီပရိုဖိုင်း၏ Dirichlet process ကိုအရောအနှောမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုပြီးဤပြောဆိုချက်ကိုအတည်ပြုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ပိုများသောအထူးသ, သူတို့ Bristol ကနှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိ Banksy ရဲ့ public ရေးခွရဲ့ပထဝီအနေအထားတည်နေရာများကိုစုဆောင်း။ Next ကိုရှေးသတင်းစာဆောင်းပါးများနှင့်လူထုမဲပေးမှတ်တမ်းများမှတဆင့်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်, Hauge နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအမည်ရှိသောတစ်ဦးချင်း, သူ၏ဇနီးနှင့်သူ၏ဘောလုံး (ဆိုလိုသည်မှာ, ဘောလုံး) အသင်း၏အတိတ်လိပ်စာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းရေးသားသူရဲ့သူတို့ရဲ့စက္ကူများ၏တွေ့ရှိချက်အကျဉ်းချုပ်:
"မရှိအခြားလေးနက်သော '' တရားခံ '[ရှိနေပြီ] စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်အတူ, က Bristol ကနှင့်လန်ဒန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် geoprofiles ၏ထိပ်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများလိပ်စာများပါဝင်ဟုဆိုခြင်းထက်အခြားဒီမှာပေးအပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး Banksy ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. အပြီးသတ်သောထုတ်ပြန်ချက်များစေရန်ခက်ခဲသည် [နာမကိုအမှီ redacted] နှင့်အတူ။ "
အောက်ပါ Metcalf and Crawford (2016) , ငါသည်ဤလေ့လာမှုဆွေးနွေးသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီ၏နာမတော်ကိုထည့်သွင်းရန်မဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။
အဆိုပါစာရေးဆရာအောက်ပါဝါကျတွေနဲ့စက္ကူ၏စိတ္တဇ၌ဤလေ့လာမှုကိုအပြစ်လွတ်: "ပိုအမြင်ကျယ်, ဤရလာဒ်များအသေးအဖှဲအကြမ်းဖက်ဝါဒ-related ပြုမူသောအမှု (ဥပမာ, ရေးခွ) ၏သုံးသပ်ချက်ကိုပိုပြီးလေးနက်မီကအကြမ်းဖက်အခြေစိုက်စခန်းတည်နေရာကိုကူညီဖို့အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းယခင်အကြံပြုချက်များကိုထောကျပံ့ ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်နှင့်ရှုပ်ထွေးသော, အမှန်တကယ်ကမ္ဘာပြဿနာမှမော်ဒယ်များ၏လျှောက်လွှာကိုတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဥပမာအားပေးပါသည်။ "ဒီစက္ကူသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲသလား ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
, ထိုစာရေးဆရာသတိပြုမိနှင့်များ၏လေးစားမှုရှိပါတယ် "[နာမကိုအမှီ redacted] နှင့်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ privacy နဲ့အရှင်သာအများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက် data တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ: အဆိုပါစာရေးဆရာကသူတို့ရဲ့စက္ကူရဲ့အဆုံးမှာအောက်ပါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှတ်စုပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့တမင်တကာတိကျသောလိပ်စာများကိုချန်လှပ်ပြီ။ "ဒီစက္ကူသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲသလား ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို? သငျသညျပုဂ္ဂလိက public / dichotomy ဤကိစ္စတွင်အတွက်သဘာဝကျပါတယ်ထင်ပါသလား?
ပုံ 6.9: Cheltenham, အင်္ဂလန်အတွက် Banksy အားဖြင့်လမ်းအနုပညာ။ ဘရိုင်ယန်ရောဘတ်မာရှယ်အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ။ source: Wikimedia Commons ။
[ ] စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာ Metcalf (2016) သောအငြင်းအခုံစေသည် "ပုဂ္ဂလိကဒေတာ်အများပြည်သူရရှိနိုင်သောအချက်အလက်စာရင်းများအတွက်ဘာသာရပ်များမှသုတေသီများအားအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အကြားပါ။ "
ဒီတူညီတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာ Metcalf လည်းထို "မဆိုသတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှုပြီးသားအများပြည်သူ Datasets ပြုထားပါတယ်" ဟုယူဆရန် anachronistic ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ၏ဥပမာတစ်ခုပေးပါ။
[ ] ဒီအခနျးတှငျရှိသမျှတို့ကိုငါဒေတာအလားအလာသက်သေပြကြောင်းနှင့်အားလုံးဒေတာအလားအလာအထိခိုက်မခံကြောင်းလက်မ၏အုပျခြုပျအဆိုပြုထား။ စားပွဲတင် 6.5 မျှသိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်သို့သော်သီးခြားလူမျိုးအားချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အချက်အလက်များ၏ဥပမာများစာရင်းကိုပေးပါသည်။
ဤဥပမာနှစ်ယောက် Pick နှင့်နှစ်ဦးစလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက် de-ကဲ့သို့ပင် anonymiztion တိုက်ခိုက်အလားတူဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ဖော်ပြရန်။
အစိတ်အပိုင်းအတွက်နှစ်ခုဥပမာ (က) အသီးအသီးအဘို့, data ကို Datasets ရှိလူအကြောင်းကိုထိခိုက်မခံတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်နိုင်ပုံကိုဖော်ပြပါ။
အခုဆိုရင်စားပွဲကနေတတိယ Datasets ကောက်။ ထိုသို့ထုတ်စဉ်းစားတစ်စုံတစ်ဦးမှတစ်ဦးကိုအီးမေးလ်ကိုရေးပါ။ ဒီဒေတာကိုအလားအလာသက်သေပြခြင်းနှင့်အလားအလာအထိခိုက်မခံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သူတို့ကိုရှင်းပြပါ။
စားပွဲတင် 6.5: မဆိုသိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်နေဆဲတိကျတဲ့လူနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည့်လူမှုရေးအချက်အလက်များ၏ဥပမာများစာရင်း။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Meta-data ကို Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
ရှာရန်မှတ်တမ်းဒေတာ Barbaro and Zeller Jr (2006)
ကျောင်းသားများကိုအကြောင်း, လူဦးရေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လူမှုရေးဒေတာ Zimmer (2010)
[ ] လူတိုင်း၏ဖိနပ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပ်နှံကြလော့သင်တို့၏သင်တန်းသားများနှင့်အထွေထွေလူထု, မင့်ကိုသင့်ရွယ်တူပါဝင်သည်။ ဒီဂုဏ်ထူးဂျူးနာတာရှည်ရောဂါဆေးရုံကြီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် (Katz, Capron, and Glass 1972, Ch. 1; Lerner 2004; Arras 2008) ။
ဒေါက်တာ Chester အမ် Southam တစ်ပုံမှန်သမားနှင့်သုတေသီကင်ဆာသုတေသန Sloan-Kettering တက္ကသိုလ်နှင့်ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်မှာဆေးပညာ၏တွဲဘက်ပါမောက္ခခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 16, 1963 တွင်, Southam နှစ်ယောက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက New York မှာဂျူးနာတာရှည်ရောဂါဆေးရုံတွင် 22 debilitated လူနာများ၏အလောင်းများကိုသို့တိုက်ရိုက်ကင်ဆာဆဲလ်တွေထိုးသွင်း။ ဤရွေ့ကားထိုးကင်ဆာလူနာများ၏ရောဂါပြီးစနစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် Southam ရဲ့သုတေသန၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်၌, Southam ကျန်းမာတဲ့စေတနာ့ကြောင့်ပြီးသားတာရှည်ကင်ဆာသူလူနာတွေကိုယူသော်လည်း, အကြမ်းအားဖြင့်4မှ6ပတ်အတွင်းထိုးသွင်းကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုငြင်းပယ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ခဲ့သည်။ Southam သူတို့ကင်ဆာရောဂါခဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ပြီးသား debilitated ကွောငျ့ကင်ဆာလူနာအတွက်နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်ခဲ့ရှိမရှိအံ့ဩကြ၏။ ဤသူဖြစ်နိုင်ခြေဖြေရှင်းရန်, Southam သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် debilitated ဒါပေမဲ့သူကကင်ဆာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ဘူးသောသူလူတစျစုသို့တိုက်ရိုက်ကင်ဆာဆဲလ်တွေထိုးသွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သုတေသန unproblematic Southam-ကိုတွေ့သဖြင့်အာမခံခကျြမြားအပျေါစိတျအပိုငျးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသူအသုံးဆေးသမား၏နှုတ်ထွက်စာအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်အစပျိုးလေ့လာမှုပြန့်ပွား၏တဲ့အခါမှာစကားလုံး, အချို့သောနာဇီချွေးတပ်စခန်းစမ်းသပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ် လုပ်. , ဒါပေမယ့်အခြားသူများကို-based ။ နောက်ဆုံးတော့ Regents ၏နယူးယောက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ Southam ဆေးပညာလေ့ကျင့်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ဖြစ်သင့်လျှင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်အမှုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ Southam သူအတွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကသူ၏ကာကွယ်ရေးမှာစောဒကတက် Southam ကာကွယ်ရေးတော်အပေါင်းတို့ကိုယ်စားသက်သေခံသောသူအအတော်များများပုံမှန်ကျွမ်းကျင်သူများကထောက်ခံခဲ့ကြရာတောင်းဆိုမှုများ, တစ်အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ် "တာဝန်ရှိလက်တွေ့အလေ့အကျင့်များကိုအကောင်းဆုံးအစဉ်အလာ။ ": (1) သူ့ရဲ့သုတေသနခဲ့သည် မြင့်မားသောသိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူမှုရေးကုသိုလ်၏, (2) သင်တန်းသားများကိုရန်မလေးမွတျအန္တရာယ်များရှိပါ၏ 600 ကျော်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံ Southam ရဲ့ 10 နှစ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအခြေစိုက်ပြောဆိုချက်ကို; (3) ထုတ်ဖော်၏အဆင့်အသုတေသီများက စုပေါင်း. အန္တရာယ်အဆင့်အညီချိန်ညှိထားရမည်, (4) သုတေသနအဲဒီအချိန်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏စံနှင့်အညီ၌ရှိ၏။ နောက်ဆုံးတွင်ထို Regents ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့လိမ်လည်မှု, လှည့်စားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကငျြ့၏ Southam အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့နဲ့တစျနှစျအဘို့မိမိအဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပဲနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Chester အမ် Southam ကင်ဆာသုတေသနပညာရှင်များ၏အမေရိကန်အသင်းဥက္ကဌရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
ဤအခနျးထဲမှာလေးအခြေခံမူကို အသုံးပြု. Southam ရဲ့လေ့လာမှုအကဲဖြတ်ရန်။
ဒါဟာ Southam သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရှုထောင့်ကို ယူ. မှန်ကန်စွာသူတို့မိမိအလုပ်အားတုံ့ပွနျနိုငျဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားပုံ, တကယ်တော့, ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမိမိအကိုယ်စားထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရဲ့သုတေသနအများပြည်သူနှောက်ယှက်စေခြင်းငှါအဘယ်သို့နားလည်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျလူထုအမြင်-သောများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုမှကွဲပြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ရှိသင်တန်းသားများကို-သငျ့သ​​ညျအဘယျသို့အခန်းကဏ္ဍထင်ပါသလဲ လူကြိုက်များအမြင်နှင့်သက်တူရွယ်တူအမြင်ကွဲပြားခြားနားလျှင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲသင့်သနည်း
[ ] အမည်ရစက္ကူခုနှစ်တွင် "အရှေ့ကွန်ဂိုအတွက် Crowdseeding: ရီးရဲလ်အချိန်အတွက်ပဋိပက္ခပွဲများ Data ကိုစုဆောင်းဖို့ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း" ဗန် der Windt နှင့် Humphrey (2016) သူတို့အရှေ့ကွန်ဂိုဖန်တီးကြောင့် (အခန်း5တွင်ရှု) တစ်ဦးဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းသည့်စနစ်ကိုဖော်ပြရန်။ သုတေသီသင်တန်းသားများဖြစ်နိုင်သောပျက်ဆီး ပတ်သက်. မသေချာမရေရာနှင့်အလျောက်ငါတို့၌အဘယ်သို့ဖော်ပြပါ။
[ ] အောက်တိုဘာလ 2014 ခုနှစ်တွင်သုံးနိုင်ငံရေးအရသိပ္ပံပညာရှင်များနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးသောသူမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိတိုင်းတာရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် Montana အတွက် 102,780 မှတ်ပုံတင်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်မှ mailers ကိုစေလွှတ်။ , အဆိုပါ mailers-သောနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ဘားရက်အိုဘားမားနှင့် Mitt ရွမ်မ်နီတို့ပါဝင်သည်သောရှေးရိုးစွဲမှလစ်ဘရယ်နေတဲ့စကေးအပေါ်တစ်ဦးဘက်မလိုက်ရွေးကောက်ပွဲ, သော 2014 ခုနှစ် Montana အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်များပြန်ကြားရေးလမ်းညွှန်-ထား Montana တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ, တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ mailer လည်း Montana ၏နိုင်ငံတော်၏မဟာအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် (ပုံ 6.10) ၏မျိုးပွားပါဝင်သည်။
အဆိုပါ mailers Montana မဲဆန္ဒရှင်မှတိုင်တန်းထုတ်လုပ်ပြီး, သူတို့သည်လင်ဒါမက်ကူလော့, ပြည်နယ်၏ Montana ရဲ့အတွင်းရေးမှူးကို Montana ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်တရားဝင်တိုင်ကြားစေ၏။ မည်သည့်အလားအလာကိုရှုပ်ထွေးမှုများဘို့တောငျးပနျနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအ mailer "ဆိုသည့်နိုင်ငံရေးပါတီ, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူဆက်နွယ်မခံခဲ့ရနှင့်မှမရည်ရွယ်ခဲ့ကွောငျးအောင် mailer လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းလူတိုင်းသုတေသီ-Dartmouth နှင့်စတန်းဖို့ဒ်-ကိုစလှေတျစာတစ်စောင်အလုပ်လုပ်သောတက္ကသိုလ်များ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမည်သည့်လူမျိုးဖြစ်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအသီးအသီးမှလှူဒါန်းခဲ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်တို့အပေါ်မှာမှီခို "အဆိုပါစာကိုလည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြောင်းရှင်းလင်း" ။ "(ပုံ 6.11)
"ဒီကော်မရှင်နာစတန်းဖို့ဒ်, Dartmouth နှင့် / သို့မဟုတ်ယင်း၏သုတေသီများ Montana ကင်ပိန်းအလေ့အကျင့်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းပြသရန်လုံလောက်သောအချက်ရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်သည်: မေလ 2015 ခုနှစ်, Montana ၏နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးအလေ့အကျင့်၏ကော်မရှင်နာ, ယောနသန်သည် Motl, သုတေသီ Montana ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ထား မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောအသုံးစရိတ်များ၏ထုတ်ဖော်လိုအပ်သောဥပဒေများကို။ "(ထဲမှာလုံလောကျရှာဖွေခြင်းနံပါတ်3Motl (2015) ) ။ အဆိုပါကော်မရှင်နာလည်းကောင်တီရှေ့နေချုပ် Montana ၏မဟာအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲမှုများအသုံးပြုခြင်း Montana ပြည်နယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြောင်းအကြံပြု (Motl 2015) ။
စတန်းဖို့ဒ်နှင့် Dartmouth Motl ရဲ့အာဏာရနှင့်အတူသဘောမတူ။ တစ်ဦးကစတန်းဖို့ဒ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ "စတန်းဖို့ဒ် ... မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြမယုံကြည်ပါဘူး" နှငျ့မေးလ်ကပြောပါတယ် "ဆိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းထောက်ခံသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်မည်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုမဆံ့မခံခဲ့ပါဘူး။ " သူမက mailer ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာက "nonpartisan ကြောင်းဖော်ပြထားကြောင်းထောက်ပြ Lisa ကို Lapins အမည်ရှိနှင့် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသို့မဟုတ်ပါတီထောက်ခံမပေးပါဘူး။ " (Richman 2015)
ဒီစာပို့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲစေသောအရာကိုအခွအေနအောက်, mailers (ကတခဏမှာအဲဒီအပေါ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီး) မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်ယူဆ?
တကယ်တော့ mailers မ​​ဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာကိုစလှေတျမခံခဲ့ရပါ။ ဂျယ်ရမီဂျွန်ဆင် (ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကူညီသူတစ်ဦးကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေ) ကတစ်ဦးအစီရင်ခံစာအဆိုအရ mailers "ဝုဏ်မြှောင်ရီပတ်ဘလီကန်အတွက်မျှတသောဖို့ရှေးရိုးစွဲအဖြစ်ဖော်ထုတ်ဝုဏ်နှင့် 39.515 မဲဆန္ဒရှင်မြှောင်ဒီမိုကရက်တစ်အတွက်မြှောင်မျှတသောဖွယ်ရှိလစ်ဘရယ်အဖြစ်ဖော်ထုတ် 64.265 မဲဆန္ဒရှင်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများသူတို့ဒီမိုကရက်တစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေအကြားသိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်မဲပေးသူမျှော်လင့်ကြောင်းမြေပြင်ပေါ်တွင်ဒီမိုကရက်တစ်နဲ့ရီပတ်ဂဏန်းအကြားကွာဟမှုအပြစ်နှင့်လွတ်။ "ဒီသုတေသနဒီဇိုင်းကိုသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲသလား ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှတုန့်ပြန်မှာ, သုတေသီသူတို့က "မဟုတ်တရားစီရင်ရေးမျိုးနွယ်ကိုအနီးကပ်မူလတန်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သောကွောငျ့စိတျအပိုငျး၌ဤရွေးကောက်ပွဲတွင်ခူးကပြောသည်။ ယခင် Montana တရားစီရင်ရေးရွေးကောက်ပွဲများ၏အခြေအနေတွင် 2014 မူလတန်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီး, သုတေသီဒီဇိုင်းအဖြစ်သုတေသနလေ့လာချက်ဖြစ်စေပြိုင်ပွဲများ၏ရလဒ်ကိုမပြောင်းမယ်လို့။ "စိတ်ပိုင်းဖြတ် (Motl 2015) ကိုဤသုတေသနသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်မပြောင်းတတ် ? ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
တကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲ (ဇယား 6.6) အထူးသဖြင့်အနီးကပ်မဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဒီသုတေသနသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲသလား ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
ဒါဟာလေ့လာမှုသုတေသီတဦးအားဖြင့် Dartmouth IRB တင်သွင်းခဲ့ကွောငျးထွက်လှည့်, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ် Montana လေ့လာမှုကနေသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ Montana မှာအသုံးပြုတဲ့အ mailer အ IRB တင်သွင်းဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုစတန်းဖို့ဒ် IRB တင်သွင်းဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ဒီသုတေသနသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲသလား ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
ဒါဟာအစသုတေသီများ New Hampshire အတွက် 143,000 ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိမဲဆန္ဒရှင်များနှင့် 66,000 ဆင်တူရွေးကောက်ပွဲပစ္စည်းများစေလွှတ်တော်မူသောအထဲကပြန်သွားလေ၏။ အဖြစ်ဝေးကိုငါသိသည်အတိုင်း, ဤသူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 200,000 နောက်ထပ် mailers အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိတရားဝင်တိုင်တန်းရှိကြ၏။ ဒီသုတေသနသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ကိုပြောင်းလဲသလား ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
အဘယ်သို့သင်ကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဘာမှလျှင်, သင်တို့ကွဲပြားခြားနားပွုပါပွီမလဲ သငျသညျအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် nonpartisan လူမျိုးအတွက်မဲပေးသူတိုးပွားခြင်းရှိမရှိရှာဖွေစူးစမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြလျှင်သင်မည်သို့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြမလဲ?
စားပွဲတင် 6.6: 2014 Montana တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲကနေရလာဒ်။ source: ပြည်နယ်၏ Montana အတွင်းရေးမှူး၏ Webpage ။
6,10 ပုံ: Mailer နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးသောသူမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိတိုင်းတာရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် Montana အတွက် 102.780 မှတ်ပုံတင်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်မှသုံးနိုင်ငံရေးအရသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်နမူနာအရွယ်အစားပြည်နယ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမဲဆန္ဒရှင်များ၏အကြမ်းအားဖြင့် 15% ရှိခဲ့သည်။
ပုံ 6,11: ပုံ 6,10 အတွက် mailer လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ Montana အတွက် 102.780 မှတ်ပုံတင်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုစလှေတျခဲ့ကွောငျးတောင်းပန်စာတစ်စောင်။ အဆိုပါစာ Dartmouth နှင့်စတန်းဖို့ဒ်၏ဥက်ကဋ်ဌ, အ mailer စေလွှတ်တော်မူသောသုတေသီများအလုပ်လုပ်သောတက္ကသိုလ်များကစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
[ ] လူသိရှင်ကြားမေလ 8, 2016, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ site ကို OkCupid မှနှစ်ဦးသုတေသီများ-Emil Kirkegaard နှင့် Julius Bjerrekaer-ခြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်တွင်အကြောင်း 70,000 အသုံးပြုသူအမည်၏ variable တွေကိုအပါအဝင်သုံးစွဲသူများ, အသက်အရွယ်, ကျားမ, တည်နေရာ, ဘာသာရေး-related ထင်မြင်ချက်၏ Datasets ပြန်လွတ်လာ နက္ခတ်ဗေဒင်-related ထင်မြင်ချက်, ချိန်းတွေ့အကျိုးစီးပွား, ဓါတ်ပုံများ, စတာတွေအရေအတွက်အဖြစ် site ပေါ်တွင်ထိပ် 2600 မေးခွန်းတွေကိုပေးသောအဖြေကို။ အပြန်လွတ်လာဒေတာပူးတွဲမူကြမ်းစက္ကူထဲမှာ, စာရေးဆရာတချို့ကဒီဒေတာကိုစုဆောင်းနှင့်ထုတ်၏ကျင့်ဝတ်ကန့်ကွက်ခြင်းငှါ "ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် Datasets ၌တွေ့ရှိသမျှကိုဒေတာတွေဟာသို့မဟုတ်ပြီးသားလူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်ခဲ့ကြ, ဒါရုံဒီ Datasets ထုတ်တစ်ဦးထက်ပိုအသုံးဝင်သော form မှာကတင်ပြသွားပါသည်။ "
ဒေတာလွှတ်ပေးရန်မှတုန့်ပြန်မှာ, စာရေးဆရာတဦး Twitter ပေါ်တွင်လို့မေးခဲ့: "ဒီ data set ကိုအလွန်အမင်း-သက်သေပြပြန်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှ username များလည်းပါဝင်သည်? မှာအားလုံးမည်သည့်အလုပ်ကဖျောက်ပေးသည်ပြုခဲ့သလဲ "။ သူ၏တုန့်ပြန်အမှတ် "ခဲ့ ဒေတာကိုပြီးသားအများပြည်သူဖြစ်ပါတယ် "။ (Zimmer 2016; Resnick 2016)
[ ] 2010 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်စစ်တပ်နှင့်အတူတစ်ထောက်လှမ်းရေးဆန်းစစ်လေ့လာသူအဖွဲ့အစည်းဝီကီလိခ်မှ 250,000 လျှို့ဝှက်သံတမန်ကေဘယ်ကြိုးတွေကိုပေး၏, သူတို့သည်နောက်ပိုင်းတွင်အွန်လိုင်း posted ခဲ့ကြသည်။ Gill and Spirling (2015) အဝီကီလိခ်ထုတ်ဖော်အလားအလာမှပုတ်ခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါအချက်အလက်များ၏တစ်ရည်ဝအောင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် "ကြောင်းငြင်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအတွက်စမ်းသပ်မှုသိမ်မွေ့သီအိုရီ ", ပြီးတော့ကစာရင်းအင်းပေါက်ကြားစာရွက်စာတမ်းများ၏နမူနာလက္ခဏာ။ ဥပမာ, စာရေးဆရာများသူတို့ကအချိန်ကာလအတွင်းအားလုံးသံတမန်ကေဘယ်လ်ကြိုး၏အကြောင်းကို 5% ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းခန့်မှန်းသို့သော်ဤအချိုးအစား (သူတို့ရဲ့စက္ကူပုံ 1 ကိုကြည့်ပါ) သံရုံးကနေသံရုံးမှကွဲပြားခြားနားသည်သော။
အဆိုပါစာရေးဆရာပေါက်ကြားစာရွက်စာတမ်းများမဆိုများ၏ content ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမပြုခဲ့ပေ။ သငျသညျကငျြ့မယ်လို့အဲဒီကေဘယ်လ်ကြိုးသုံးပြီးမည်သည့်စီမံကိန်းကိုရှိပါသလား? သငျသညျကငျြ့မညျမဟုတျသောထိုကေဘယ်လ်ကြိုးသုံးပြီးမည်သည့်စီမံကိန်းကိုရှိပါသလား?
[ ] ကုမ္ပဏီတွေတိုင်တန်းရန်တုံ့ပွနျပုံကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်တစ်သုတေသီနယူးယောက်စီးတီးရှိ 240 High-end စားသောက်ဆိုင်များအတုတိုင်ကြားစာအက္ခရာများကိုစေလွှတ်။ , ဤတွင်အယောင်ဆောင်ပြီးစာတစ်စောင်မှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါငါသည်သင်တို့၏စားသောက်ဆိုင်မှာခဲ့မကြာသေးမီကအတှေ့အကွုံအကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသောကွောငျ့ "ငါသည်သင်တို့အားဤစာရေးသားခြင်းဖြစ်၏။ မကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့တဲ့, ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပ။ ထိုရောဂါလက္ခဏာများအစာစားပြီးနောက်လေးနာရီအကြောင်းပေါ်လာဖို့စတင်ခဲ့ကြသောအခါ ... ထိုညဦးယံ soured ခဲ့သည်။ အစာအဆိပ်သင့်မှု: တိုးချဲ့ပျို့, အန်, ဝမ်းရောဂါနှင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်တက်အားလုံးတယောက်အရာမှထောက်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးရင်ခုန်စရာညဦးယံ၌အကြှနျုပျထကျပစ်၏ကျည်အကြား၌အကြှနျုပျတို့၏ရေချိုးခန်း၏ tiled ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်သန္ဓေသားအနေအထားတွင်ဖွင့်ခွေကိုကြည့်, ငါ၏မယားကိုလျှော့ချခဲ့သည်ကြောင်းစဉ်းစားငါ့ကိုပြင်းထန်သောစေသည်။ ... က သာ. ကောင်း၏စီးပွားရေးဗျူရိုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်အတူမည်သည့်အစီရင်ခံစာများ file ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဖြစ်သော်လည်း, သင်တို့ကိုငါလိုခငျြ [အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏အမည်], သင်တို့ကိုငါအညီတုံ့ပြန်မည်ကြောင်းအတွက်မျှော်ရှောက် သွား. အဘယျသို့နားလညျဖို့။ "
"ပိုင်ရှင်တွေ, မန်နေဂျာများနှင့်စားဖိုမှူး [နာမကိုအမှီ redacted] ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတ်တမ်းများ, ပြန်လည်သုံးသပ် menus တွေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပျက်စီးကြောင်းစားစရာဘို့ပေးပို့ထုတ်လုပ်ဘို့ကွန်ပျူတာများမှတဆင့်ရှာဖွေနှင့် ပတ်သက်. မီးဖိုချောင်လုပ်သားများမေးခွန်းထုတ်ကြောင့်အချက်အပြုတ်ပရမ်းပတာခဲ့: ဤတွင်ထိုစာကိုလက်ခံရရှိသူကစားသောက်ဆိုင်တုံ့ပြန်ပုံကိုဖွင့် ဖြစ်နိုင်သမျှချုံး, တက္ကသိုလ်နှင့်ပါမောက္ခနှစ်ဦးစလုံးယခုငရဲကနေစီးပွားရေးကျောင်းတွင်လေ့လာခဲ့လို့ညံံ့ခံဘယ်သို့သောအားဖြင့်အားမာန်အားလုံး။ " (Kifner 2001) ဤအချက်အလက်သင်လေ့လာမှုကိုအကဲဖြတ်ပုံကိုပြောင်းလဲရန်ပါသလား
အဖြစ်ဝေးကိုငါသိသည်အတိုင်း, ဤလေ့လာမှုတစ်ခု IRB သို့မဟုတ်အခြား third-party အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ သငျသညျလေ့လာမှုကိုအကဲဖြတ်ပုံကိုကပြောင်းလဲမှုလော အဘယ်ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်မခံသနည်း
[ ] ဒီယခင်မေးခွန်းအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းငါသည်လည်းစားသောက်ဆိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုဤလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့သင်ချင်ပါတယ်။ ဒီအခြားလေ့လာမှုမှာ, Neumark နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (1996) စားသောက်ဆိုင်ငှားရမ်းလိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်, Philadelphia တွင် 65 စားသောက်ဆိုင်မှာစားပွဲထိုးနှင့်စားပွဲထိုးအဖြစ်အလုပ်လျှောက်ထားရန်လုပ်ကြံကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူနှစ်ဦးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးကောလိပ်ကျောင်းသားကိုစေလွှတ်။ , 54 အင်တာဗျူးများနှင့် 39 အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုမှဦးဆောင်သည့် 130 applications များ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းစားသောက်ဆိုင်များတွင်အမျိုးသမီးများ၏ဆန့်ကျင်လိင်ဆက်ဆံမှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်ဤလေ့လာမှုယခင်မေးခွန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့တမှ Ethics ကွဲပြားခြားနားသည်ထင်ပါသလား။ ဒါကြောင့် အကယ်. ဘယ်လို?
[ ] 2010 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တချို့ကအချိန်, United States မှာ 6,548 ပါမောက္ခဒီတစ်ခုနှင့်ဆင်တူအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ငါသည်တအလားအလာ Ph.D ဘွဲ့ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုသောကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုရေးသားပါ၏ သင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူကျောင်းသား။ အကြှနျုပျ၏အစီအစဉ် Ph.D ဘွဲ့ကိုလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် အစီအစဉ်များကိုဒီလာမယ့်ကျဆုံးခြင်း, ငါဒီအတောအတွင်းသုတေသနအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုငါလုပ်နိုင်သလောက်လေ့လာသင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်၏။
သငျသညျအတိုချုပ်သင်၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ငါနှင့်အတူတွေ့ဆုံရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်တဲ့အခါသင် 10 မိနစ်ရှိစေခြင်းငှါငါ့အဘို့မဆိုဖြစ်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရလျှင်ငါအံ့သြခဲ့ပါတယ်, ငါသည်ကျောင်းဝင်းအပေါ်ယနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်, ငါကအတိုအသိပေးစာသည်ကိုသိပေမယ့် သင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း။ သင်နှင့်အတူတွေ့ဆုံဒီကျောင်းဝင်းခရီးစဉ်အတွင်းကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးဖြစ်သကဲ့သို့, သင်သည်ငါနှင့်အတူဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့မဆိုအချိန်။
ဤရွေ့ကားအီးမေးလ်များကိုပါမောက္ခ 1 ပေါ် မူတည်. အီးမေးလ်တုံ့ပြန်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိတိုင်းတာရန်လယ်စမ်းသပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်း) လာမည့်ရက်သတ္တပတ် vs အချိန်ကို-frame ကို (ယနေ့ခဲ့ကြ) နှင့် 2) ပေးပို့သူ၏နာမတော်ကိုလူမျိုးစုနှင့်ကျား, မအချက်ကွဲပြားခဲ့သည့် (ဥပမာ, Meredith ရောဘတ်, Raj Singh ကစသည်တို့ကို) ။ အဆိုပါသုတေသီများတောင်းဆိုမှုများကို 1 ပတ်အတွင်းတွေ့ဆုံရန်သောအခါ, ကော့ကေးဆပ်ယောက်ျားကပိုမကြာခဏအမျိုးသမီးများနှင့်လူနည်းစုများဖြစ်ကြသည်ထက် 25% အကြောင်းဒြေအဖွဲ့ဝင်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သို့သော်ထိုအယောင်ဆောင်ပြီးကျောင်းသားများကိုသည်ဤပုံစံများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြသည်ထိုနေ့အစည်းအဝေးများမေတ္တာရပ်ခံလာသောအခါ (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) ။
လေ့လာမှုကျော်ခဲ့ပွီးနောကျ, သုတေသီအားလုံးသင်တန်းသားများကိုအောက်ပါ debriefing အီးမေးလ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
"မကြာသေးခင်က, သင်သည်သင်၏ Ph.D ဘွဲ့ကိုဆွေးနွေးရန်သင့်ရဲ့အချိန်ရဲ့ 10 မိနစ်ကိုတောင်းဆိုနေတာကျောင်းသားတစ်ဦးထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိ အစီအစဉ် (ထိုအီးမေးလ်ကိုယျခန်ဓာကိုအောက်တွင်ပေါ်လာပါ) ။ ဒါကြောင့်သုတေသနလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သည်အီးမေးလ်၏အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင်သင် debrief မှယနေ့သင်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းကြသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုသငျသညျဆိုပြတ်တောက်စေဘဲသင်တို့ရှိသမျှ inconvenienced မှာခဲ့ကြလျှင်တောင်းပန်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့မြော်လင့်ဤစာသင့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းသင့်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသက်သာစေနိုင်ကြောင်း, ငါတို့၏လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံလောက်သောရှင်းပြချက်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျဤသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိအဘယ်ကြောင့်ဥာဏ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကသင်၏အချိန်နှင့်နောက်ထပ်စာဖတ်ခြင်းဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့သညျဤကြီးမားသောပညာသင်နှစ်လေ့လာမှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မျှော်လင့်သိကျွမ်းခြင်းပညာ၏တန်ဖိုးကိုမြင်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
"အဖြစ်မကြာမီကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနရလဒ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်အတိုင်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသူတို့ကို post လိမ့်မည်။ မတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာ - ။ အဘယ်သူမျှမသတ်မှတ်ဒေတာအစဉ်အဆက်ကဒီလေ့လာမှုကနေအစီရင်ခံပါလိမ့်မည်စိတ်ချပါ, ငါတို့ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းအကြားသာစုစုပေါင်းအီးမေးလ်တုန့်ပြန်မှုပုံစံများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်သေချာငြိမ်ဝပ်စွာနေ ကျေးဇူးပြု. တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ဘယ်သူမျှမကကျနော်တို့ထုတ်ဝေသုတေသနသို့မဟုတ် data ကိုမဆိုအတွက်သက်သေပြရလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, တစုံတယောက်သောသူသည်တစ်ဦးချင်းစီကိုအီးမေးလ်တုန့်ပြန်တစ်ဦးချင်းဒြေအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးတစ်ခုတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံသို့မဟုတ်ကျဆင်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်မျိုးစုံကိုအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေတာအားလုံးကိုပြီးသား-de ဖော်ထုတ်နှင့်သက်သေပြတဲ့အီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်ဆက်စပ် server ကနေဖျက်ပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဒေတာသက်သေပြခဲ့သည့်အခါအချိန်ကာလအတွင်းကခိုင်ခံ့လုံခြုံတဲ့စကားဝှက်နှင့်အတူ protected ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပညာရှင်များလူ့ဘာသာရပ်များနှငျ့ပတျသကျသောသုတေသနပြုအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း protocols များကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တွေ '' Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (ထိုကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် Morningside IRB နှင့် Pennsylvania ပြည်နယ် IRB တက္ကသိုလ်) ကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်အမြဲတမ်းအမှုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသုတေသနဘာသာရပ်အဖြစ်သင့်အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, သင် askirb@columbia.edu မှာ 212-851-7040 မှာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်က Morningside Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နှင့် / သို့မဟုတ် 215 မှာ Pennsylvania ပြည်နယ် Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့တက္ကသိုလ်စေခြင်းငှါ -898-2614 ။
ဤကိစ္စတွင်အတွက် debriefing များအတွက်အငြင်းပွားမှုများဘာတွေလဲ? ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံဘာတွေလဲ? သင်သုတေသီများဤကိစ္စတွင်အတွက်သင်တန်းသားများကို debriefed သင့်ကြောင်းထင်ပါသလား
ထိုထောက်ပံ့အွန်လိုင်းပစ္စည်းများအတွက်, သုတေသီအမည်ရအပိုင်းများ "လူ့အောကျခံကာကွယ်ပါ။ " ဒီအပိုင်းကိုဖတ်ပါ။ သင်ထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့တစုံတခုကိုမျှလည်းမရှိ။
သုတေသီဤစမ်းသပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ သင်တန်းသားများသည်ဤစမ်းသပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ အင်ဒရူး Gelman (2010) ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီလေ့လာမှုမှာသင်တန်းသားများကိုသူတို့၏အချိန်များအတွက်လျော်ကြေးငွေခဲ့ကြနိုင်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်။ သဘောတူပါသလား? အခန်းအတွက်အခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အငြင်းအခုံလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။